Ogaden News Agency (ONA) – Hawl-wadeenada jaaliyadda Ogadenya ee Galbeedka Australia oo shir muhiim ah isugu yimid
Hawl-wadeenada jaaliyadda Ogadenya ee Galbeedka Australia oo shir muhiim ah isugu yimid
Maalintii ay Taariikhdu ahayd 17\_9\_12 ayaa waxaa shir muhiim ah isugu yimid hawladeenada jaaliyada Ogadenia ee galbeedka Australia (Perth). Shirkan oo lagaga hadlayay Arimo muhiima ayaa waxaa sidii caadada u ahayd shirarka jaaliyadaha waxaa lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Mudane Sheekh Abdiqadir.
Wacdigii diiniga ahaa ka dib waxaa laguda galay ujeedadii shirka oo uu soo bandhigay Gudoomyahay Jaaliyada Somalida Ogadenia perth Halgame Aden Dakhare isagoo ka warbixiyay waxqabadka jaaliyada oo sheegay inay jaaliyadan ay had iyo goor heegan u tahay halganka lagu xoraynayo Ogaadeeniya.
War bixintaa Gudoomiyaha jaaliyada ka dib wuxuu codbaahiyaha ku soo dhaweeyay afayeenka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia mudane Cadaani Hirmooge oo si qoto dheer uga waramay xaalada guud uu wadanku ku suganyahay iyo isbadalada kasoo cusboonaaday Geeska Africa.
Intaa kadib waxaa madasha lagu go’aamiyay in la qaban-qaabiyo mudaharaad wayn oo lagaga soo horjeedo xasuuqa balaadhan ee gumaysiga Itobiya uu ku hayo shacabka S.Ogadenia.
Shirkan ayaa ku dhamaaday jawi farxad iyo afgarad ku dheehantahay.